USIZI LWENDLU KOWASE-MLALAZI – Sivubela intuthuko Newspaper
Indlu okuhlala kuyo umndeni wakwaMthethwa kuWard 16 ngaphansi kwamasipala uMlalazi
OWESIFAZANE waseMvutshini ngaphansi kwamasipala uMlalazi kuWard 16 enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uZama Mthethwa ukhala ngesimo abahlala ngaphansi kwaso njengoba behlala beyisihlanu kwindlu engekho esimeni esikahle.
Lo mndeni wamalunga ayisihlanu uhlala kwindlu edilikile nengawa noma yinini. “Isimo esihlala ngaphansi kwaso sinzima njengoba uma izulu lina kugeleza amanzi. Okunye sihlala sibahlanu nokwenza ngigcine abanye sengibayisa kubangani bayolala khona,” kusho Mthethwa.
Lo mndeni uziphilisa ngemali yesibonelelo nokwenza kubenzima satshe ukuthi bapatanise ukwakha indlu, njengoba bezama okuta ngasethunjini kuphela. “Akekho osebenzayo kuleli khaya siziphilisa ngemali yesibonelelo sabantwana. Kunzima kwazise kwayona lemali iphelela ekuthengeni ukudla ukuze sikwazi ukuthi silale sidlile,” kuchaza uMthethwa.
Lowo oyiPr Councillor kuleWard uBongani Ngidi unxusa osomabhizinisi ukuba baphonse esivivaneni ukuze kusizakale lomndeni. “Sinxusa noma ubani ongaba nosizo ukuba aphumele phambili kusizakale lomndeni ohlala ngaphansi kwesimo esibucayi,” kusho Ngidi.
Ikhansela lakulendawo kuWard 16 kumasipala uMlalazi uBhekinkosi Ngidi uveze ukuthi lomndeni uzosizakala emva kwathaqa (Lockdown) njengoba umasipala uzoqalisa uhlelo lwezindlu zabahlwempu ezingama-20 kwiWadi ngayinye. “Sesilinde ukuthi kuphele uthaqa bese kuqalisa uhlelo lwaSukuma Sakhe lukamasipala ,” kuphetha uNgidi.
Kusukela kuqale uthaqa lomndeni awukaze uhlomule nasohlelweni lwamaphasela okudla.